ကြယ်ပြာရဲ့ အိမ်ကလေး: December 2009
[ပုံလေးကို ဒီက andrewsullivan.theatlantic.com ယူထားပါတယ်]
တိမ်ပြာရီရီ နဲ့ ညနေဆီရောက်ရင်လည်း
ပြိုမလို ညိုတလှည့်နဲ့ တိမ်တွေညှို့ဆိုင်း မှိုင်းလာရင်လည်း
သည်းတချို့ ဖွဲတချို့ မိုးစက်ငယ်တွေ ခုန်ပေါက်ဆော့ကစားတာမြင်လည်း
ကမ်းစပ်ကို ခိုးနမ်းသွားတဲ့ လှိုင်းခေါင်းဖြူတွေကိုကြည့်ရင်းလည်း
လလေးရေးရေး မကွေးတကွေးကို ကြည့်ရင်းလည်း
သူတစ်လူ ငါတစ်မင်းနဲ့ တောက်ပနေတဲ့ ကြယ်စင်အစင်းစင်းကို ကြည့်ရင်းလည်း
လွမ်းတယ်ကွယ် … .ငါ မင်းကို အရမ်းလွမ်းတယ် …
Posted by ကြယ်ပြာ at 7:56 AM 15 comments Links to this post
ခုတလောအချိန်အားလေးနည်းနည်းရရင် မြန်မာဗွီဒီယိုကားလေးတွေကြည့်ဖြစ်တယ် …
နောက်ပြီး ရုပ်ရှင်တွေ၊ ဗွီဒီယိုတွေက ခေတ်ရဲ့အရိပ်ကိုတကယ်ပဲထင်ဟပ်စေသလားဆိုတာ လည်းကျွန်မတွေးမိတယ် .… တကယ်လို့ ထင်ဟပ်စေတယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ အနည်းငယ်တော့ ဘ၀င်မကျချင်သလိုလိုပါပဲ …
ခုတလောကြည့်မိတဲ့ကားလေးတွေထဲမှာ “Club” သွားမယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ခဏခဏပြောကြတယ် …. ကလပ်မှာ ကတဲ့အခန်းတွေတော်တော်လေးပါကြတယ် … ချမ်းသာတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကလူငယ်တွေတင်လားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး ….. သာမန်ဝန်ထမ်းအနေနဲ့သရုပ်ဆောင်သူတွေကလဲ ကလပ်သွားမယ် … ကမယ် .. .အကြောတွေလျော့မယ်တဲ့ …. တကယ်ပဲ မြန်မာပြည်ကလူငယ်လေးတွေ အဲ့လိုဖြစ်နေကြသလားကျွန်မသိချင်လာတယ် … အဓိကကတော့ မိန်းကလေးတွေပါ … ခေတ်နောက်ကျကျန်နေတယ်လို့ပြောရမလား၊ အမြင်ကျဉ်းတယ်လို့ပဲဆိုရမလားပဲ ဒီကလပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို မိန်းကလေးတွေအတွက် သဘောမကျတာတော့အမှန်ပဲ …. သွားဖူးလို့လားလို့ မေးရင် ကျွန်မတစ်ခါမှမသွားဖူးပါဘူး …. အမြင်နဲ့တင် စိတ်ကသိကအောင့်နိုင်လွန်းလို့လို့ပဲဖြေရမယ်ထင်ပါတယ် …. မသွားဖူးပဲနဲ့လာပြောနေတယ်လို့ဆိုရင်လဲ ကလပ်ကိုမိန်းကလေးတွေသွားခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးလေးတွေတော့ သိချင်ပါတယ် … ကျွန်မကဆိုးကျိုးတွေပဲမြင်နေလို့ပါ …. ကျွန်မအသိကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ကရတော့ဘယ်လိုနေလဲ … ဘာဖြစ်လို့သွားတာလဲလို့ မေးကြည့်ဖူးပါတယ် … သူကပြောတယ် စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ခုန်ပေါက်ကရတော့ စိတ်တွေပေါ့ပါးသွားတယ်တဲ့ …. မိုက်မိုက်လေးတွေလဲတွေ့ရတယ်တဲ့ … ယောက်ျားလေးတွေအတွက်တော့ မဆိုးလှဘူးပေါ့ …. ဆေးချ၊ ဖဲရိုက်၊ အပျော်အပါးလိုက်နေတာထက်စာရင်တော်သေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါသေးတယ် …
ဒီနေ့ညကြည့်မိတဲ့ကားမှာကရင်းနဲ့ပြသနာတက်ကြပါတယ် …. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကတဲ့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က ကနေတဲ့မိန်းကလေးကို တင်ပါးကိုင်လိုက်လို့တဲ့ ….
ကောင်မလေးတွေက နင်ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဘာလုပ်လို့လဲတဲ့ …. ဒီမှာ ကောင်မလေးတွေကဒေါပွပြီး နင်ငါ့ရဲ့-င်(ဒီလိုစကားလုံးမျိုးကိုလဲ ဆင်ဆာကခွင့်ပြုပါတယ်) ကို ကိုင်လိုက်တယ်လေဆိုတော့ … ကောင်လေးဖြေပုံက ကောင်မလေးကဖျားယောင်းလို့ ကိုင်လိုက်သတဲ့လေ …. ကျွန်မစိတ်ထဲအတွေးတွေထပ်ဝင်လာပြန်တယ် … ကနေတဲ့ထဲမှာ လူကောင်းတွေရှိနိုင်သလို၊ အခွင့်ရေးသမားတွေလဲရှိနိုင်ပါတယ် … ဒီလိုကိစ္စတွေမဖြစ်ဘူးလို့ ဘယ်သူမှအတပ်မပြောနိုင်ဘူးလေ။ ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း ဒီလောက် ရှုပ်ရှက်ခတ်နေပြီး မှိတ်တလှည့် လက်တလီမီးရောင်ထဲဝင်ကတော့ အကိုင်ခံရတာနည်းသလားလို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ ….
ကျွန်မတို့တွေ ကားကျပ်ကျပ်ကို လူချင်းထပ်စီးနေရတာတောင် တတ်နိုင်သလောက် အိတ်တွေ ထမင်းဗူးတွေနဲ့ကာပြီး မတတ်သာလို့သာ စီးကြရတာပါ …. ခုတော့ အထိ အကိုင်ခံချင်လို့လူကြားထဲဝင်တိုးကြသလားလို့တွေးရမလိုဖြစ်နေပြီ ……
Posted by ကြယ်ပြာ at 11:17 AM 17 comments Links to this post